Walloo Kibbaa Wucaaleetti namoonni sadii ajjeefamanii torba madaa'aniiru - BBC News Afaan Oromoo
Walloo Kibbaa Wucaaleetti namoonni sadii ajjeefamanii torba madaa'aniiru
Naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa, aanaa Ambaasal magaalaa Wucaaleetti rasaasa eenyu akka dhukaase adda hin baafamneen lubbuun namoota sadii darbee kanneen torba ta'an ammoo madaa'uu poolisiin aanichaa BBC'tti himeera.
Ajjeechaafi miidhaan qaamaa kunis walitti bu'iinsa humnootii nageenyaafi dargaggoota jiduutti umameen ta'usaa barameera.
Itti-gaafatamaan Qajeelcha Poolisii aanichaa Inspeektar Makonniin Shumuu akka jedhaniitti, waliitti bu'iinsa guyyaa Kamisaa umamee kanaan namoota lubunsaanii darbe keessa lama dubartoota.
Namoota sababa walitti bu'insa kanaan ajjeefaman kanneen alattis, namoonni shan miidhaa qaamaa olaanaaf kan saaxilaman yoo ta'u, hospitaala Daseefi dhaabbilee fayyaa kan biraatti wallanamaa jirachuu himameera.
Walitti bu'iinsi lubbuun namootaa akka baduuf ka'umsa ta'e kunis Agayya 15, 2019 kan uumame lafa qonnaan bultootaa erga beenyaan kanfalameen booda hojjattoota mootummatiif kenname irratti ta'u Inspektarri mummee kun ni dubbatu.
Jiraattoonni BBc'n dubbise akka maqaansaanii eeramu hin barbaanne akka jedhaniitti, walitti bu'insichi osoo hin uumamiin guyyaa tokkoon dura, oggeessoonni laficha safaruuf bakka sana deemanii turan dargaggoota naanichaatiin reebamusaaniifi dargaggoonni gocha kana raawwataniis poolisiin to'annoo jala olfamusaanii dubbatu.
Lafti ijaarsa manaatiif kenname kun kan argamu magaalaa Wucaaleerraa fageenya kilomeetira sadiirratti bakka maqaansaa Abagaar Meedaa jedhamuun beekamudha.
Baatii Adooleessaa keessa qonnaan bultoota naannichaa laficha irraa ka'aniif beenyaan kaffalamusaa kan yaadatan Inspektari Makonnin, walitti bu'insichi kan uumamee wayita oggeessoonni mana qopheessaa laficha safaruuf achitti argamaniitti dargaggoonni naannichaa walitti qabamuun yeroo dhufanitti jedhaniiru.
Wayita sanattis qaamni nageenyaa aanicha bakka sanatti argamuun haala jiru asgabbeesuuf yaalii taasisee kan ture yoo ta'u, "dargaggoonni tokkummaan ka'uun qaamoolee nageenyaa irratti dhaggaa darbachuu eegalan," jedhaniiru.
Poolisini haalicha tasgabbessuuf dhukaasa dhageessisu illeen, ''gaaffiin dargaggootaa eddoo keenya gadhiisaa kan jedhu waan tureef, nageenyi kan bu'u yoo ta'e jechuun iddoo sana dhiifnee baanee turre,'' jechuun attamiin dhimmicha obsaan darbuuf akka yaalan himu.
Kanaanis humnootii nageennya eegsiisan qofa osoo hintaane, oggeessoota laficha safaruuf achi turan hunda fuudhanii bahuu dubbatu.
Jiraattoonni naanichaa akka himaniitti, taatee duraa hordoofuun boromtaa isaas ''dargaggoonni lafichi nuuf ta'uu mala,'' jedhan walitti qabamuun hiriira akka gaggeessaniifi kanneen hidhaman hiksiisuuf gara buufata poolisittiitti qajeeluu dubbatu.
Itti-gaafatamaan Qajeelcha Poolisii aanichaa akka jedhaniitti, humnootiin nageenyaa erga buufata poolisii qaqabaniin booda dargaggoonni lakkoofsi isaanii dabaluun [akka jadhaniitti hanga 300 ta'un] dhufuun ''hidhamtoota buufata poolisii aanaa Ambaasaliitti argaman hiiksiisuuf yaalii taasisuu isaanii'' ibasniiru.
Rasaasni dhukaasmusaafi buufanni poolisii dhagaan reebamusaa himuun, poolisiinis kan ittisuuf yaalii taasisu duubbatu.
Namoonni lubbunsaanii darbeefi kanneen miidhaaf saaxilaman dhukaasa eenyuutiin akka ta'e adda baasnii akka hin beekne nutti himaniiru.
Nammoonni naannicha turan BBC'tti akka mirkanneesaniitti, dargaggoonni humnootii nageenyaa waliiin waliitti bu'usaaniin kan uumamee ta'uu himanii, ''Naannichi dhukaasaan raafame, hundinuu yaa kotteekoo na baase jedhe,'' jechuun haala ture himu.
Jiraattoonnis walitti bu'insichaan lubbuun namoota sadii darbuusaa himanii, baayyeen akka madaa'an, ''kan kufanillee kan kaafne erga dhukaasni qabbanaa'een booda ture,'' jedhaniiru.
Namoonni lubbuusaanii dhabaniifi miidhaan irra ga'e kanneen waliitti bu'insa keessatti hirmaatan akka hin turre kan himan jiraattoonni, namoota nageenyaa karaa demaa turan jedhaniiru.
Waldhabdee Dawwaa Caffaatti dhalateen 4 du'an
Walitti bu'iinsa umamee keessaa harka qabu jedhamanii namoonni shakkaman sadii to'annoo poolisii jala olfamusaanii Inspeektar Makoonniin BBC'tti himaniiru.
Magaalaan Wucaalee harra guyyaa gabaa ta'usaa caqasanii, naannichi hanga tokko tasgabaa'usaafi rakkinnicha furuuf humnootiin nageenyaa jiraattota waliin marii taasisaa jiraachuu Inispeektar Makoonnin Shumuu dabaluun himaniiru.
Jiraattoonni naannichaa dubbifnes waliitti bu'iinsaan booda poolisiin Federaalaafi humni aaddaa naannoo Amaaraa naannichatti bobba'uu himanii, harra magaalattiin tasgabbaa'u ibsaniiru.
Waldhabdee Naannoo Amaaraa Godina Oromoo Dawwaa caffaatti dhalateen 4 du'an
Lammiileen Tuniziyaa warshaa keessa adda of qooduun maaskii oomishuu eegalan
'Yeroo Covid-19 hammaatetti intarneetiin Lixa Oromiyaatti cufame turuun isaa baay'ee na yaachise'